आउन थाल्यो श्रमिकको माग: खाडी भन्दा पनि बढी युरोपेली मुलुकबाट आउन थाल्यो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Employement Opprotunity/आउन थाल्यो श्रमिकको माग: खाडी भन्दा पनि बढी युरोपेली मुलुकबाट आउन थाल्यो !
काठमाडौँ – कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्थामा केही श्रम गन्तव्य देशबाट नेपालीका लागि नयाँ माग आउन थालेको छ । त्यसै आधारमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीले १० देखि २० प्रतिशतसम्म नेपाली श्रमिकको माग आउने जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।